UHLAZIYO-MNQOPHISO 20 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UHLAZIYO-MNQOPHISO 20UHLAZIYO-M ... 20
201“Xa uthe waphuma usiya kulwa notshaba, waza wabona ukuba lona luneenqwelo namahashe, nomkhosi walo ungaphezulu kowakho, sukoyika. *UNdikhoyo uThixo wakho owakukhupha eJiputa uya kuba nawe. 2Phambi kokuba uhlasele makuze umbingeleli, afike athi apho emkhosini: 3‘Hoyina, maSirayeli! Namhla ilizwe lifile! Kambe ke sanukuba nantaka, ningabi nadyudyu! Musan' ukuphaphazela! 4Kaloku uNdikhoyo uThixo wenu uya kuba nani; nguye oza kunilwela anithwes' uloyiso.’
5“Ke zona iinduna ziya kubhekisa emkhosini zithi: ‘Ngaba kukho ndoda na apha kuni esandula ukwakha indlu, kodwa ingekayivuli? Xa kunjalo ke lowo makabuy' umva agoduke. Kungenjalo, xa athe akabuya emfazweni, loo ndlu yakhe iya kuvulwa mntu wumbi. 6Ngaba kukho indoda esandula ukutyala isidiliya, kodwa ingekavuni kuso? Xa kunjalo ke leyo mayibuy' umva; kungenjalo, xa ithe ayabuya emfazweni, loo wayini yayo iya kuxhanyulwa mntu wumbi. 7Ngaba kukho indoda elobolayo na apha phakathi kwenu? Xa ikho mayibuye umva; hleze ithi xa kwenzekile ayabuya emfazweni, lowo owayeza kuba ngumkayo atshatwe yindoda yimbi.’
8“Kwakhona iinduna ziya kubuzisa zithi: ‘Ngaba kukho indoda enentliziyo kanina na apha? Xa kunjalo ke mayibuy' umva, hleze isulele namanye.’ 9Ziya kuthi ke zakukhov' ukwenjenjalo iinduna ezo, ibutho ngalinye limiselwe izinxiba-mxhaka zalo.
10“Xa uya kuhlasela isixeko, abemi baso qala ubaphe ithuba lokuzinikezela. 11Xa bathe bavula amasango bezinikezela, bonke baya kuba zizicaka zakho bakusebenzele. 12Kambe ke xa abemi abo bengafuni kunikezela, bekhetha ukulwa, umkhosi wakho mawusingqinge eso sixeko. 13Akuba ekuvulele ke uNdikhoyo uThixo wakho ukuba uhlasele, tshabalalisa yonke into eyindoda apho. 14Kambe ke ungabathimba abafazi, nabantwana, nemfuyo, nako konke okulapho kweso sixeko. Ungayisebenzisa yonke into elixhoba oyithimbe kolo tshaba lwakho; uNdikhoyo uThixo wakho ukuphile. 15Uya kwenjenjalo ke xa usilwa nezixeko ezikude, nditsho ezingezizo ezeentlanga eziningqongileyo.
16“Kodwa ke xa uhlasela isixeko esikwakwelo lizwe uliphiwa nguNdikhoyo uThixo wakho, uzubulale konke nje. 17Vuthulula utshabalalise wonke umntu: amaHiti, ama-Amori, amaKanana, amaPerezi, amaHivi, namaJebhusi, ngokomlomo kaNdikhoyo uThixo wakho. 18Batshabalaliseni khon' ukuze banganiwexuleli ekumoneni uNdikhoyo uThixo wenu, banifundise ezaa ndlela zabo zimasikizi bazinqula ngazo *izithixo zabo.
19“Xa uhlasela isixeko, sukuyigawula imithi yaso yeziqhamo, noba ungade usingqinge ixesha elide kangakanani na. Ungazitya iziqhamo ezo, kodwa ke ungayitshabalalisi yona imithi. Kungani uhlasele imithi ingelotshaba lwakho nje! 20Ke yona eminye imithi ungayigawula uyisebenzise ekwaphulen' iimpondo eso sixeko ulwa naso.”